Xildhibaanada baarlamaanka oo ku kala qeybsan ansaxinta sharciga jinsiyadda – The Voice of Northeastern Kenya
Xildhibaanada baarlamaanka oo ku kala qeybsan ansaxinta sharciga jinsiyadda
Waxaa galinka dambe la filaya in maalinkii labaad baarlamaanka dalka uu yeesho dood lagu kala qeybsamay oo ku saabsan meel marinta sharci la doonayo in sara loogu qaado tirada haweenka mudanayaasha ah.
Mudanaha laga soo doortay degaan baarlamaneedka Kimilili ee ismaamulka Bungoma ,Didmus Barasa ayaa ku baaqay inuu jiro nidaam lagu xaqiijinayo in haweenka xisbiyada ay soo magacaabayaan ay yihiin kuwo ka shaqeynaya danaha dumarka kenyaank ah.
Hasa ahaate Mr. Barasa ayaa ku doodaya in meel marinta sharcigan ay horseedi karto in la soo magacaabo haween ay isu dhowyihiin ama sida uu hadalka u dhigay xariir kala dhexeya hoggaamiyaasga xisbiyada siyaasadeed.
Sido kale hoggaamiyaasha urur weynaha mucaaradka Nasa ee kala ah Raila Odinga iyo Kalonzo Musyoka ayaa mudanayaasha kula taliyay inay ansaxiyaan sharci ay ku tilmaameen mid lagama maarmaan ah oo la doonayay in xili hore qalinka lagu duugo oo uu dhaqangalo.
Marka Kenya loo barbardhigo wadamada kale ,baarlamaanka Rwanda xildhibaanada ka tirsan ayaa boqolkiba 61 haween ah 61, Tanzania iyo Burundi tiradaasi ayaa ah boqolkiba 36 ,Uganda waxay tiradaasi u dhigantaa boqolkiba 34 halka Kenya ay tahay 22 .
Xildhibaanada haweenka ah ayaa wada olole ay ugu jiraan sidii loo badin lahaa tiradooda golaha sharci dejinta.
Guddoomiyaha ururka ay ku mideeysanyihiin siyaasiyiinta haweenka ah Purity Ngirici ayaa ku baaqday in dhinac la isaga dhigo fikradaha khaldan ee dumarka laga aaminsanyahay sidaasi awgeedna fursad loo siiyo hoggaanka.
Dhanka kale guddiga baarlamaanka dalka u qaabilsan awoodaha ayaa waaxda dembi baarista ee DCI-da iyo guddiga anshaxa iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ee EACC ku amray inay dabagal ku sameyaan eedeymo loo soo jeediyay xildhibaanada qaar oo ahaa inay laaluush qaateen.
Eedeyntan ayaa soo baxday kadib markii xubnaha golaha sharci dejinta ay dhinac isaga dhigeen warbixin ay soo saareen guddiyada ganacsiga iyo beeraha.
Waxaa warbixinta lagu eegayay sonkor kontarabaan ah oo la sheegay in wadanka la soo geliyay.
Mudanayaasha qaar oo la farfiiqay ayaa la sheegay inay qaateen lacago laaluush ah oo u dhexeya 10,000 ilaa iyo 20,000 oo shilin in kastoo ay iska fogeyeen.
Guddoomiyaha guddiga awoodaha ee baarlamaanka Justin Muturi ayaa DCI iyo EACC u soo jeediyay inay muddo 90 maalmood gudahood ku soo gudbiyaan warbixino dhameystiran.
← Booliska oo raadinaya koox weerar ka geysatay Kilifi
In ka badan 85,000 oo carruur ah oo macluul ugu dhintay Yemen →